DriverBoost Pro 8.2.0.10 Full With Patch ~ လမင်းတရာ
IN Driver Software - ON 12:09 AM No comments
DriverBoost Pro 8.2.0.10 | 2.7 MB
သင့် ကွန်ပျူတာမှာ driver တွေ လိုအပ်နေတာသင်သတိထားမိလား....? အမှူ့ မဲ့ အမှတ်မဲ့ နေလိုက်ရုံ နဲ့ သင့် ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်နေတဲ့driver တွေ ရနေပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့update တောင်းနေတဲ့ driver တွေအများကြီး ရှိနေမှာ ပါ။ ကွန်ပျူ တာတစ်ခုလုံးကို မောင်းနှင်ပေးမဲ့driver တွေသေနေလို့ မရပါဘူး။ ဒီကောင်လေးကတော့ လိုအပ်နေတဲ့driver တွေကိုauto ရှာပေးပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါ ဘယ်တော့ မှ update မဖြစ်တော့ ဘူးလို့ တော့ပါဘူး ။ဖိုင်ဆိုဒ် ( 4MB ) ပဲရှိတာကြောင့်အဆင်ပြေမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။။အထဲမှာ patch file လေးကို ထည့် သွင်းပေးထားတာကြောင့်full version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အသုံးပြုပုံကတော့ အောက်မှာလေ့ လာလို့ ရအောင်ထည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ DriverBoost Pro 8.2.0.10 Full Version + Crack
နဲ့ သင့် ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်နေတဲ့driver တွေ ရနေပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့update တောင်းနေတဲ့ 
driver တွေအများကြီး ရှိနေမှာ ပါ။ ကွန်ပျူ တာတစ်ခုလုံးကိုမောင်းနှင်ပေးမဲ driver တွေသေနေလို့ 
မရပါဘူး။့ဒီကောင်လေးကတော့ လိုအပ်နေတဲ့driver တွေကိုauto ရှာပေးပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခါ ဘယ်တော့ မှ update မဖြစ်တော့ ဘူးလို့ တော့ပါဘူး ။ဖိုင်ဆိုဒ် ( 2.7 MB ) ပဲရှိတာကြောင့် အဆင်ပြေမယ်
လို့ ယူဆပါတယ်။။အထဲမှာ patch file လေးကို ထည့် သွင်းပေးထားတာကြောင့်full version အဖြစ်
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အသုံးပြုပုံကတော့ အောက်မှာလေ့ လာလို့ ရအောင်ထည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။
DriverBoost Pro makes updating your driversabreeze! Simply download and the software scans your system locating outdated and missing drivers for your PC and all connected devices. With ultra fast scan times, advanced backup options, Windows restore wizard plus an advanced matching algorithym, you’ll never have to worry about locating or updating drivers again! Initial free scan informs you of all out of date drivers on your system
DriverBoost Pro isadriver update service that will scan your computer for all installed & connected hardware, locate all OEM drivers and provide them in an easy, convenient format. Individual drivers may be available on manufacturer websites at no charge.